Nhau - Kutendeseka kurudziro yesimba kuchengetedza uye zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza
Kuvimbika kurudziro yekuchengetedza magetsi uye zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza
Multi element yakakwenenzverwa skrini ndeye munhu uye akangwara kuongorora michina yakagadzirirwa nekambani yedu zvinoenderana nezvinodiwa nemusika uye maitiro ekugadzira.
Kuita uye hunhu hwezvakawanda zvinhu zvakakwirira kugona skrini.
1. Iyo feeder uye inodedera skrini inosanganiswa kuita imwe. Iyo yega feeder iri mukuvhara muviri kwemugumo wekudyisa weiyo inozungunusa skrini, uye iyo vibration sosi yemugumo wekudyisa iri kunze kwekuvhara muviri. Irabha nyoro yekubatanidza inoshandiswa kubatanidza neyekuvhara chivharo, iyo inochengetedza zvakanyanya nzvimbo yekukwirira.
2. Iyo yekudengenyeka feeder inowanikwa mukati meyekuzeya skrini, iyo inoderedza poini yekuvhura yeguruva kufashukira. Iyo gedhi chute inoiswa zvakananga muchikamu chekudyisa cheiyo vibration yekudyara chiteshi, iyo inovandudza kuchengetedza kwezvakatipoteredza maitiro.
3. Yakabatana vibration skrini, screen vibration, screen side haibatanidzwe mukuzungunuka, inoderedza iyo vibration mhando, inoderedza kukanganisa kwaro hwaro. Iyo skrini uye vibration inonakidza yakaiswa muzvikamu, kudedera zvakazvimiririra, zviri nyore kupaza nekuchengetedza.
4. Chinodedera chinozorodzwa chakaiswa kunze kwechidzitiro, icho chinobvisa mukana wekuti guruva rakakura riri nyore kupinda mukamuri yekutakura, uye iyo inotakura ine hupenyu hwakareba hwebasa.
5. sintering sieve plate ndeye-imwechete-yakapetwa-yakapetwa-bhaa bheyi ndiro ine yakakwira yekuongorora kushanda. Iyo coke skrini inotora isina simbi bar kana ceramic bar bar, ine hupenyu hwakareba husinga pinde.
6. Maumbirwo echinhu chechitanhatu-chakakwirira-chinobudirira chinovharwa uye chine hutano hwekuchengetedza nharaunda.
7.Manomwe Iyo yekudyisa sisitimu yakavharwa kumagumo ekudyisa eiyo inodedera skrini. Izvo zvinhu zvinoyerera zvichibva pagedhi rehute kuenda kune anodyisa, wozoenda kune chute pamagumo ekuburitsa kweiyo shale shaker uye yayo yepamusoro zvinhu, uye izvo zvinhu zviri pasi pechidzitiro kusvika pakuburitsa hopper uye chute. Zvese zvakaoma kubatana zvinosunganidzwa pasina guruva kufashukira poindi, iyo inogona kudzikisira mweya vhoriyamu yeiyo vibration skrini guruva muteresi pasi peya blast furna muchina, uye chengetedza guruva kubvisa simba kushandiswa uye kugadzirisa kwechengetedzwa kwemidziyo midziyo kusvika padanho rakakura Mari yezvinhu uye basa mutengo.
8.mazhinji element yakakwira kushanda kwescreen muviri ingangoita hupenyu-hwakareba hwekuchengetedza mahara, ingo chinja chinzvimbo cheplate ndiro uye vibration zvinonakidza.
Multi element yakakwenenzverwa skrini, yakanakisa kuita, Ultra-yakaderera mashandiro emutengo, isarudzo yako yakanaka.